रजस्वला सुक्ने बेलामा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस् (भिडियो सहित) | Hamro Doctor News
आइतवार, २२ मंसिर २०७६ /
ब्रेस्ट मसाजको छ अनेक फाइदा, जानौं गर्ने सहि तरिका
मिर्गौला बिगार्ने 'लुपस नेफ्राइटिस्' के हो ? जानौं जोगिने उपाय
२५ प्रतिशत नेपालीले खान्छन् उच्च रक्तचापको औषधि
रातमा श्वास लिन अप्ठयारो हुन्छ ? दम भएको हुनसक्छ
रेडियोलोजीको आवश्यकता किन छ ? (भिडियोसहित)
रजस्वला सुक्ने बेलामा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस् (भिडियो सहित)
रजस्वला सामान्य र नियमित प्रक्रिया भए पनि यसलाई हेर्ने दृष्टि भने फरक फरक छ । विशेष गरेर रजस्वला सुक्ने समयमा महिलाहरु स्वास्थ्य प्रति बढि सचेत हुनुपर्छ । यस अवस्थाका कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोजी वैद्य मल्लका टिप्स् :
रजस्वला हुनु महिलाको सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो । रजस्वलाले महिला प्रजनन् क्षमतामा सक्षम छिन् भन्ने कुराको संकेत गर्छ । रजस्वला भएको ५–६ दिनको अवधिमा महिलाहरुले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । त्यसमा पनि रजस्वला सुक्ने अवधिमा अझ सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश महिलाहरुमा ४५–५६ वर्षको उमेरमा रजस्वला सुक्ने गर्दछ । यस अवस्थामा रजस्वला महिनै पिच्छे नियमित हुदैन । कहिले चाँडो हुन्छ त कहिले ३–४ महिनामा, कहिले वर्षको एक चोटी हुने गर्दछ । कसै कसैमा थोरै मात्र रगत देखा पर्ने गर्दछ । हर्मोनको कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ । यद्यपी यस्तो अवस्थालाई महिलाहरुले सुक्ने बेलामा यस्तै हुन्छ भनेर हेलचेक्र्याइँ गर्ने गर्छन् । तर हैन् यो अबस्था भनेको गम्भीर रोगको लक्षण नहोला भन्न सकिन्न।
यस अबस्थामा यस्ता लक्षण देखिए खतराको संकेत :
१. लामो अन्तरालमा रजस्वला हुने ।
२. कहिलेकाँही थोरै मात्र रगत देखिने ।
३. यौन सम्पर्कका बेला रगत बग्ने ।
४. कालो ढिक्का–ढिक्का रगतबग्ने ।
५. रजस्वलाको समयमा तल्लो पेट अत्याधिक दुख्नु ।
यस्ता लक्षण देखिँदा पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । त्यसकारण यस्ता कुनै पनि लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ । समयमै स्वास्थ्थ परीक्षण गरायो भने सम्भावित खतराबाट जोगिन सकिन्छ ।
Last modified on 2017-06-23 17:22:02
जब कुरा सेल्फ केयरको हुन्छ अनि महिलाहरु आफ्नो छालालाई स्वस्थ राख्नका लागि फैशियल,...
मिर्गौला हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसले शरीरमा भएको रगतलाई सुद्ध बनाइ शरीरभरी...
काठमाडौं, २० मंसिर । करिब २५ प्रतिशत नेपालीले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने औषधि...
एजेन्सी, २० मंसिर । दिनभर जस्तोसुकै कडा र अप्ठयारो काम गरे पनि रातको समय आनन्दसँग...
काँचो प्याज खानाले हुन्छ अनेक फाइदा
निद्रामा घुर्ने समस्याबाट कसरी छुट्कारा पाउने ?
कान बज्ने वा कराउने कारण यस्तो छ -डा. निता शाक्य मल्ल